Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la codsado magan-gelyo
Waa inaad u sheegtaa Hey'ada Socdaalka inaad doonaysid inaad codsato magan-gelyo. Waxaad ka codsan kartaa magan-gelyo Hey'ada Socdaalka oo ku taala Göteborg, Malmö, Stockholm, Boden, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala iyo Örebro.
Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad ka Hey'ada Socdaalka uga jawaabto su'aalo isu eeg dhowr goor mudada wakhtiga aad tahay magan-gelyo doon. Tani sabab uma aha in Hey'ada Socdaalku aanay rumeysnayn waxa aad sheegayso. Tani waxaa sabab u ah in Hey'ada Socdaalku doonayso inay hubiso inay fahmeen waxa aad macnaynayso iyo in adigu aanad ilaawin inaad sheegto wax hore. Mararka qaarkood waxaa kale oo kuu fududaan karta inaad ka sheekayso waxyaabaha adag ka dib marka wakhti ka soo wareegay.
Kulanka ugu horeeya ee lala yeesho Hey'ada Socdaalka
Marka ugu horeysa ee aad la kulanto Hey'ada Socdaalka waa kulan kooban. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo badan oo adiga kugu saabsan. Tusaale ahaan:
Xilliga aad dhalatay.
Wixi ku saabsan qoyskaaga.
Haddii aad hayso cinwaanka iyo lambarka telafoonka ee waalidkaaga.
Halka aad ka timi.
Luqada aad ku hadasho.
Sida aad ugu soo safartay Iswiidhan.
Sababta aad uga soo tagtay dalkaaga iyo waxa aad aaminsantahay inay dhacayaan haddii aad dib ugu noqoto.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa dhaca marka aad la kulanto Hey'ada Socdaalka marka ugu horeysa oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Waxaad la kulmi doontaa Hey'ada Socdaalka mar dambe iyadoo uu kula socdo wakiilkaaga caruurta ama gar-yaqaankaaga. Markaasi ayaad dhamaystiri doontaa codsigaaga magan-gelyo.
Dadka waaweyn way ku caawin karaan
Adigaaga yimi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah waxaad caawimaad ka helaysaa dhowr dad waaweyn ah oo kala duwan xilliga wakhtiga aad codsanayso magan-gelyo.
Mid ka mid ah dadkaas waaweyn waxaa lagu magacaabaa wakiilka caruurta (god man). Wakiilka caruurta wuxuu tusaale ahaan kula joogayaa marka aad la hadlayso Hey'ada Socdaalka.
Waxaad xitaa la kulmi doontaa gar-yaqaan. Waa qof yaqaana sharciyada Iswiidhan. Gar-yaqaanku wuxuu kaa caawinayaa inaad codsato magan-gelyo iyo inaad rafcaan qaadato haddii aanad ku qanacsanayn go'aanka codsigaaga magan-gelyo.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa dadka waaweyn ee aad la kulmaysaa sameeyaan
Codso kaalmo dhaqaale haddii aanad haysan wax lacag ah oo gaar kuu ah. Waxaad helaysaa kaar bangi iyo warbixinta nooca kaalmada dhaqaale ee aad codsan karto. Adigaaga buuxiyay 16 sano keligaa ayaad codsan kartaa kaalmo dhaqaale oo aad helaysaa kaar bangi oo gaar kuu ah. Haddii aad ka yartahay 16 waa wakiilkaaga caruurta qofka kuu dalbaya kaalmada iyo qofka gacanta ku haynaya lacagtaada.
Hey'ada Socdaalka waxay warqad u soo diri doonaan adiga iyo wakiilkaaga caruurta ama gar-yaqaankaaga taas oo ay ku qorantahay inaad la kulmi doontaan hawl-wadeen jooga Hey'ada Socdaalka. Tani waxay ahaan kartaa xafiis kale oo aan ahayn halkii aad ka dhiibatay codsigaaga magan-gelyo. Warqadan waxaa ku qoran meesha iyo wakhtiga aad la kulmi doontid hawl-wadeenkan.
Marka adiga iyo wakiilkaaga caruurta aad la kulantaan hawl-wadeenkan jooga Hey'ada Socdaalka waxaad u sheegaysaa qofka aad tahay, halka aad ka timi, wixi ku saabsan qoyskaaga iyo qaraabadaada iyo caafimaadkaaga. Waxaa kale oo aad ka hadli doontaan waxa dhacaya xilliga wakhtiga aad tahay magan-gelyo doonka. Waxaad helaysaa fursad aad ku dhiibato su'aalo.
Waxaad xitaa heli kartaa caawimaada inaad wacdo waalidkaaga ama qaraabadaada kale si aad ugu sheegto halka aad joogto iyo caafimaadkaaga.
Markay noqoto wakhtigaagi aad imanaysay baaritaanka magan-gelyo waxay Hey'ada Socdaalku warqad u soo dirayaan adiga iyo wakiilkaaga caruurta. Warqadan waxaa ku qoran xilliga iyo meesha aad kula kulmi doonto Hey'ada Socdaalka hawl-wadeenkeeda.
Adiga, wakiilkaaga caruurta iyo gar-yaqaankaaga waad joogtaan xilliga baaritaanka magan-gelyo. Hal ama laba qof oo ka tirsan Hey'ada Socdaalka ayaa su'aalo ku weydiinaya oo qoraya waxa aad ka hadlaysaan. Turjubaan kaa caawinaya inaad fahamto waxa la sheegayo ayaa xitaa jooga xilliga baaritaankan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa wakiilka caruurta iyo gar-yaqaanku sameeyaan.
Wax walba uga sheekee Hey'ada Socdaalka
Dadka jooga xilliga baaritaanka oo dhan waxaa waajib ku ah qarinta sirta. Tani waxay khuseysaa shaqaalaha Hey'ada Socdaalka, gar-yaqaankaaga iyo turjubaanada. Tani micnaheedu waa in iyaga aan loo oggolayn inay qof kale uga sheekeeyaan wixi aad sheegtay xilliga baaritaanka magan-gelyo.
Ka dib marka baaritaanka magan-gelyo la sameeyo ee Hey'ada Socdaalku samayso qiimeynteeda waxaad heli doontaa oggolaanshaha ama diidmada codsigaaga magan-gelyo.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa baaritaanka magan-gelyo yahay oo ku qoran bogga Hey'aada Socdalka. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.